Umbhali Wezithombe zeROSA: Imenenja elula yokushisa izithombe ze-ISO kwi-USB | Kusuka kuLinux
Emkhathini wendawo Izicelo ze-GNU / Linux kukhona izinketho ezahlukahlukene, ngokwamathuluzi noma Abaphathi bokushisa amafayela wesithombe se-ISO kumadrayivu e-USB. Futhi namhlanje, sekuwukujika kocingo olwaziwa kancane Umbhali Wezithombe zikaRosa.
Umbhali Wezithombe zikaRosa iyi-app encane edonsa amehlo eyenziwe futhi yasatshalaliswa yiqembu noma inhlangano yaseRussia ebizwa I-RussianLab, naye ophethe eyakhe I-GNU / Linux Distro shayela Ideskithophu yeROSA. Isizathu sokuthi kungani, senzelwe ngokukhethekile ukurekhoda ngokuhlukahlukene nangokuqondile Amafayela e-ISO ku-a Idrayivu ye-USB, kwenze kahle nangempumelelo ngamafayela e-ISO we-Russian Distro eshiwo.
Kuyaqapheleka, kulabo abangenalwazi oluningi ngalokhu I-GNU / Linux Distro IsiRashiya Ideskithophu yeROSA ukuthi kungukusatshalaliswa kwabathanda umhlaba we-GNU / Linux futhi okwamanje okuya kunguqulo I-ROSA Desktop Entsha R10. Inguqulo ezalwe njengokukhishwa kwesibili okususelwa ku- ipulatifomu ebomvana, yona eneminyaka emi-2 yokusekelwa okujwayelekile neminyaka emi-2 yokuxhaswa okwandisiwe, futhi izibuyekezo zayo zokuphepha ezizonikezwa kuze kube sekupheleni kuka-2020, ngokusho konjiniyela bayo.
Okwamanje, I-ROSA Desktop Entsha R10 Inezindawo ezimbili ezisemthethweni zedeskithophu (iPlasma 5, i-KDE 4) nezindawo ezimbili ezihambisanayo zedeskithophu ezinokuxhaswa komphakathi (LXQt, Gnome 3). Ekugcineni, ukuthola eminye imininingwane ngalokhu I-GNU / Linux Distro Ungavakashela isixhumanisi sayo esisemthethweni kokulandelayo isixhumanisi kusuka ku-wiki yakhe, noma lena evela enkampanini yokuthuthukisa i-Linux yaseRussia ebizwa I-LLC NTC IT ROSA.
1 Umbhali Wezithombe zeROSA
1.2 Isebenza kanjani?
1.3 Ingabe ilungele okunye ukwabiwa?
Umbhali Wezithombe zeROSA
Mayelana nesicelo sethu esifundwayo kule ndatshana, okusho ukuthi, Umbhali Wezithombe zeROSA futhi ngokuya nge Iwebhusayithi esemthethweni, okufanayo:
Kuza kufakwe kuqala kunguqulo yakamuva etholakalayo ye- I-ROSA Desktop Entsha R10
Ingafakwa kwezinye Izinhlelo Zokusebenza ze-GNU / Linux, ngaphezu kwalokho IWindows ne-Mac OS X, usebenzisa amafayela kanambambili (ama-executable) ngosayizi abalandelayo:
I-Linux 32-bit (5,2 Mb)
I-Linux 64-bit (5,1 Mb)
I-Mac OS X (6,1 Mb)
Ikhodi yomthombo wayo iyatholakala, kokulandelayo Indawo yokugcina ye-ABF.
Njenge- I-MX-Linux Distro nokusetshenziswa kwayo komdabu (okwakho) "I-MX Yakha i-Live-USB" (i-MX Live USB Maker) ukurekhodwa ngempumelelo ku- Idrayivu ye-USB, lo I-Distro ROSA Desktop Kudinga isicelo esikhethekile sale njongo, ngoba inesakhiwo se-hybrid.
Okusho ukuthi, Ideskithophu yeROSA iqukethe izihloko ze Izithombe ze-ISOkanye namatafula wokuhlukanisa amarekhodi ama-boot asetshenziselwa ama-hard drive nama-flash drive. Ngaleyo ndlela, ukuthi uhlelo lwakho olulungiselelwe ludinga ukulibhala kuphela kufayela le- i-flash disk ethembekile ifayela le-ISO ngaphandle kwenkinga. Njengoba nje, uma kukhona I-GNU / Linux Distro ithuluzi lomugqa elijwayelekile elibizwa ngokuthi "Dd". Noma, ukusebenzisa leli thuluzi kudinga ikhono elithile nokuqapha okuningi ukugwema ukubhala ngaphezulu idiski engalungile.
Ingabe ilungele okunye ukwabiwa?
Abathuthukisi bethuluzi baveza ukuthi lokhu kuzoncika kwifayela le- I-GNU / Linux Distro akhethwe umsebenzisi. Kepha bayakhawulela, ukuthi uma kuthiwa amafayela we Izithombe ze-ISO kokunye kwe-GNU / Linux Distros kungabhalwa kufayela le- i-flash disk (i-USB Drayivu) usebenzisa i- umyalo "dd" noma elinye ithuluzi elifanayo elenza amakhophi amancane, ngakho-ke yebo, Umbhali Wezithombe zeROSA ingasetshenziswa ukwenza okufanayo.
Uma, ngokuphambene nalokho, kusho amafayela we Izithombe ze-ISO kudinga amathuluzi athuthuke kakhulu, ahlukanisa i-flash disk, ayifomethe, akopishe idatha njengeqoqo lamafayela, phakathi kwezinye izinqubo ezikhethekile, ngakho-ke cha, Umbhali Wezithombe zeROSA ngeke kusize.
Ukuthintana namanye amathuluzi awusizo kule ndawo, sincoma ukuthi sifunde okuthunyelwe kwethu kwangaphambilini kwendaba:
Siyethemba lokhu "okuthunyelwe okuwusizo okuncane" ngalolu hlelo lokusebenza oluncanyana olubizwa nge- «ROSA Image Writer», esivumela ukuthi sikwazi ukurekhoda kalula nangokuqondile okuhlukahlukene Amafayela e-ISO ku-a Idrayivu ye-USB, ikakhulukazi lezo eziqukethe i- I-Russian GNU / Linux Distro shayela «ROSA Desktop», okungumakhi wesicelo esishiwo; ube kakhulu inzalo nokusetshenziswa, Kuwo wonke «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» kanye negalelo elikhulu ekusabalalisweni kwemvelo emangalisayo, enkulu futhi ekhulayo yezicelo ze «GNU/Linux».
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Umbhali Wezithombe zeROSA: Imenenja elula yokushisa izithombe ze-ISO kwi-USB
I-Apple neThimba Le-Google Benza phezulu bese Bethula Ithuluzi Lokulandela Ngokulandela I-COVID-19 Ngabe Lokhu Kuyophela Imfihlo?